Wararkii u dambeeyey ee xaalada deegaanka Tukaraq oo ay ciidamada Somaliland la wareegeen(dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 9, 2018 9:56 b 0
Dagaal ayaa laga cabsi qabaa in markale uu maanta ka dhaco deegaanka Tuka-raq ee gobolka Sool halkaasi oo ay shalay ciidamo kasocday maamulka soomaaliland ay lawareegeen.
Dadka deegaanka Tukaraq ayaa cabsi xoogan ka qaba dagaalkaasi in markale uu dhaco.
Ciidamo badan oo ka socday Puntland ayaa shalay ilaa iyo xalay gaaray deegaankaasi ,waxayna dowlada Puntland ay hakisay isusocdkii gaadiidka iyo dadka ee ka imanaayay dhanka soomaaliland.
Wararka ay helayso idaacada Daljir ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay dadka ay caburin ku hayaan.
Hadaba Maxamed Faarax waxa uu ka midyahay dadka ku nool deegaanka Tukaraq , Wariyaheena Deeqo Bashiir Maxamuud (Ladan) ayuu uga waramay xaalada deegaanka sida ay tahay maanta .
Shacabka magaalada Qandala ee gobolka Bari oo bogaadiyay socdaalka M/wayne Farmaajo ee Puntland (dhegayso)